दिनमा दुई घण्टा उभिदा हुने फाइदाहरू यस्ता छन्, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
एक नयाँ अध्यय्नले दैनिक दुई घण्टा उभिनु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताएको छ ।कुनैपनि कार्यक्षेत्रमा दैनिक दुई घण्टा उभिनाले मधुमेह, मोटोपना, मानसिक रोग, तथा अन्य थुप्रै समस्याबाट मुक्ति मिल्ने तथा फिट रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
कार्यालयसमा लामो समयसम्म लगातार कुर्चीमा बसेर काम गर्नेहरुमा स्वास्थ्य समस्या आउने बताइएको छ । अध्ययनले कम्तीमा पनि दुई घण्टा र यो समय विस्तारै बढाएर ३ देखी ४ घण्टासम्म पुरयाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उभिने कार्यलाई सघाउने गरी कार्यलयको बनावट मिलाउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । अध्ययन अनुसार कार्यालयको कुल समयभर करीब ७० देखी ८० प्रतिशत मानिसहरु बसी बसी काम गर्ने वा बसेर वित्ने देखिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरु छिटै शारीरिक तथा मानसिक रोगी हुने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनले बसेर काम गर्नेलाई ३० ४० मिनेटको अन्तरमा शरीर तत्काउने गर्नु भन्दै सुझाव दिएको छ । कर्मचारीलाई बसेर उभिएर काम गर्ने बाताबरण बनाउन सके त्यसले उत्पादकत्वमा निकै बृद्धि हुने सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकाको रोग रोकथाम र निवारण केन्द्रअनुसार “रोग लाग्नदेखि बच्ने वा रोग फैलिन नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय हात धुनु हो।” फोहोर हातले नाक वा आँखा छुँदा रुघाखोकी लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले हात फोहोर हुन नदिन नियमित रूपमा हात धुनुपर्छ।
सरसफाइमा ध्यान दियौं भने निमोनिया र झाडा-पखालाजस्ता गम्भीर समस्यादेखि जोगिन सक्छौं। यी रोगहरूले गर्दा हरेक वर्ष पाँच वर्षमुनिका २० लाखभन्दा धेरै बालबालिकाको मृत्यु हुने गर्छ। हात धुने बानी बसाल्दा इबोलाजस्तो डरलाग्दो रोग फैलिन पाउँदैन।
हाछ्युँ गरेपछि वा खोकेपछि।
कुनै-कुनै देशमा परिवारको लागि पर्याप्त मात्रामा सफा पानीको प्रबन्ध गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो समस्या संसारको जुनसुकै ठाउँमा हुन सक्छ। जस्तै: बाढी वा आँधीहुरीको कारण अथवा पाइप फुटेकोले वा अरू नै कारणले पानी दूषित हुँदा समस्या हुन सक्छ।
त्यति मात्र होइन, यदि पानी सुरक्षित मुहानबाट आएको छैन वा सही तरिकामा जगेडा गरिएको छैन भने यसमा परजीवीहरू फैलँदै जान सक्छ। साथै हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड, हेपाटाइटिस वा अन्य संक्रामक रोगहरू लाग्न सक्छ। दूषित पानीले गर्दा हरेक वर्ष लगभग १ अरब ७० करोड मानिसलाई झाडापखाला लाग्छ।
रोग फैलिन नदिन वा त्यसलाई लाग्नै नदिन विभिन्न तरिका अपनाउन सकिन्छहैजाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको मलमूत्रले दूषित भएको पानी वा खानेकुरा खाएमा हैजा लाग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसरी पानीले गर्दा निम्तिने समस्याबाट जोगिन तपाईं कस्ता कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ?
धाराको पानी दूषित छ जस्तो लाग्छ भने पानी प्रयोग गर्नुअघि उमाल्नुहोस् वा पानी शुद्ध पार्न रासायनिक पदार्थ मिसाउनुहोस्।क्लोरिन वा पानी निर्मलीकरण गर्ने चक्की प्रयोग गर्दा निर्देशन राम्ररी पढ्न नबिर्सनुहोस्।फिल्टर प्रयोग गर्ने हो भने गुणस्तरीय फिल्टर प्रयोग गर्नुहोस्।
पानी निर्मलीकरण गर्ने पदार्थहरू उपलब्ध छैन भने एक लिटर पानीमा दुई थोपा ब्लिच मिसाउनुहोस् र लगभग ३० मिनेट त्यतिकै छोड्नुहोस्।शुद्ध पानीलाई फेरि दूषित हुन नदिन सफा भाँडामा छोपेर राख्नुहोस्।पानी उघाउन प्रयोग गरिने भाँडा सफा छ कि छैन, पक्का गर्नुहोस्।पानी उघाउनुअघि हात धुनुहोस्। पिउने पानीमा हात वा औंला नडुबाउनुहोस्।
पोषणयुक्त खानेकुराविना स्वस्थ हुन सकिंदैन। त्यसैले पोषण पाउनको लागि स्वस्थकर अनि सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्छ। खानेकुरामा नुन, चिल्लो र चिनीको मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ। साथै कति खान्छौं, त्यसमा पनि विचार पुऱ्याउनुपर्छ। थरीथरीका फलफूल र तरकारी खानुपर्छ।
प्रशोधन नगरिएको खाद्यान्नमा पोषणतत्त्व र रेसा धेरै हुन्छ। त्यसैले पाउरोटी, पास्ता, चामलजस्ता खाद्यान्न किन्दा प्याकेटको पछाडि लेखिएको जानकारी पढ्नुपर्छ। हामीलाई प्रोटिनयुक्त खानेकुरा पनि चाहिन्छ। त्यसैले अण्डा र बोसो कम भएको मासु थोरै मात्रामा खानुपर्छ अनि सम्भव छ भने हप्तामा दुई पटक जति माछा खानु राम्रो हो।
कुनै-कुनै देशमा प्रोटिनयुक्त तरकारी तथा गेडागुडी पनि पाइन्छ।चिनी र चिल्लो पदार्थ धेरै मात्रामा खानुभयो भने अत्यधिक वजन बढ्ने खतरा हुन्छ। यस्तो खतरा कम गर्न गुलियो पेय पदार्थको साटो पानी पिउनुहोस्। मिठाईको सट्टा प्रशस्तै फलफूल खानुहोस्। ससेज, मासु, मखन, चीज, कुकिजजस्ता चिल्लो धेरै भएको खानेकुरा कम खानुहोस्।
खाना पकाउन घ्यू वा मखन नभई स्वस्थकर तेल प्रयोग गर्नुहोस्।धेरै नुन भएको खानेकुरा खाने गर्दा उच्च रक्तचाप हुन सक्छ। तपाईंलाई उच्च रक्तचाप छ भने सोडियमको मात्रा कम गर्न खानेकुरा किन्दा त्यसको पछाडि लेखिएको जानकारी राम्ररी पढ्नुहोस्।
तपाईं के खानुहुन्छ, त्यो मात्र होइन कति खानुहुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं स्वाद लिई-लिई खानुहोला तर मीठो छ भन्दैमा भोक मेटिसकेपछि पनि अझ खाने नगर्नुहोस्।विषाक्त खानेकुराको खतराबारे पनि विचार गर्नुपर्छ। यदि खानेकुरा राम्ररी पकाइएको छैन वा सुरक्षित तरिकामा राखिएको छैन भने कुनै पनि खानेकुरा विषाक्त हुन सक्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनअनुसार असुरक्षित खाना खाएर हरेक वर्ष लाखौं मानिस बिरामी पर्छन्‌। थुप्रै मानिस निको हुन्छन्‌ तर केहीको भने ज्यानसमेत जान्छ। यस्ता खतराहरू कम गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?
सुत्नुअघि धेरै खाने, चियाकफी पिउने, मद्यपान गर्ने नगर्नुहोस्।
यी सल्लाहहरू लागू गरेर पनि तपाईं राम्रोसँग सुत्न सक्नुहुन्न वा दिउँसो धेरै निद्रा लाग्छ वा निद्रामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्।
Don't Miss it करियरको सफलताको लागि १० प्रेरक भनाइहरू
Up Next मित्रता सम्बन्धि सुन्दर भनाइहरू – जानीराखाै